အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်သည့် အဖုလုံးသေးများ သို့မဟုတ် ငါးမျက်စိရောဂါ (Molluscum Contapiosam) – Healthy Life Journal
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ၊—–
Q. ငါးမျက်စိဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံကို ပြောပါသလဲ ဆရာမ။
A. ငါးမျက်စိဆိုတာ အရေပြားပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလုံးသေး၊ အဖုလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးမျက်စိ အဖုတစ်ခုက ၂-၅ မီလီမီတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အသားရောင် အဖုလေးတွေဖြစ်ပြီး ညှစ်လိုက်ရင် အဆံလေးတွေ ထွက်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ရင် အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Q. ငါးမျက်စိက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာမ။
A. ငါးမျက်စိက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငါးမျက်စိဖြစ်တဲ့ နေရာက ခေါင်းကစပြီး ခြေ၊ လက်၊ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာဖြစ်ရင် ဆိုးပါတယ်။ သတိထားရပါမယ်။ AIDS ရောဂါနဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ ငါးမျက်စိ အဖြစ်များတတ်သလို အသက်နှစ်နှစ်- သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးတွေမှာလည်း အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ငါးမျက်စိ အလုံးပေါင်း ရာချီနေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေမှာဆို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကူးစက်လွယ်တတ်ပါတယ်။
“ငါးမျက်စိဖြစ်တဲ့နေရာက ခေါင်းကစပြီး ခြေ၊ လက်၊ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါမှာဖြစ်ရင် ဆိုးပါတယ်။ သတိထားရပါမယ်။”
Q. ငါးမျက်စိက ကူးတတ်ပါသလား ဆရာမ။
A. ငါးမျက်စိကို ကိုင်တွယ်ရင် မိမိဘာသာလည်း တခြားအရေပြားနေရာကို ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ တချို့ ဆိုရင် တစ်အိမ်တည်းမှာ နှစ်ယောက်- သုံးယောက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထိတွေ့မှုနဲ့ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။
Q. ငါးမျက်စိဖြစ်ရင် သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုကုသလို့ ရပါသလဲ ဆရာမ။
A. သီအိုရီအရ ငါးမျက်စိရောဂါက သူ့အလိုလို ပျောက်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အလွန်ကြာတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နှစ်ချီပြီး ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပျောက်ဖို့ စောင့်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပွားလာတတ်လို့ပါ။ ငါးမျက်စိကုသတဲ့နည်းက ငါးမျက်စိကို ထုံဆေးလိမ်းပြီး ထုံသွားတဲ့အခါကျမှ သန့်ရှင်းအောင် ပိုးသတ်ထားတဲ့ အပ်နဲ့ ငါးမျက်စိအဖုကို ဖောက်ကာ ညှစ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ပိုးသေဆေးလိမ်းပေးရပါတယ်။ တကယ်လို့ ငါးမျက်စိက သိပ်များနေရင် ခွဲခန်းထဲမှာ ခြစ်ထုတ်ပေးရပါတယ်။
Q. ငါးမျက်စိဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဆေးကုသမှု နည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသလဲ ဆရာမ။
A. ငါးမျက်စိဖြစ်တဲ့အခါ ရောင်ရမ်းမှုကျစေတဲ့ဆေး၊ ယားနာပျောက်ဆေးနဲ့ စတီးရွိုက်ပါတဲ့ ဆေးတွေကို လိမ်းရင် ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာ အသားမာတက်တာကိုလည်း ငါးမျက်စိလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တာက ဖိနပ်မာမာတွေစီးတာ၊ ဖိနပ်ကျပ်ကျပ်တွေ စီးတာနဲ့ မတော်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို စီးတာတွေကြောင့် ခြေထောက်အသားမာ တက်ရတာပါ။ ဒါဆိုရင် ဖိနပ်ပြောင်းစီးဖို့ လိုပါတယ်။ ခြေထောက်အသားမာကို ဓား ဒါမှမဟုတ် ကြေးတွန်းကျောက်နဲ့ ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ လက်သည်းညှပ်နဲ့ ညှပ်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ မရရင်တော့ ထုံဆေးထိုးပြီး ခွဲထုတ်ရပါတယ်။
Related Items:medical knowledge, Molluscum Contapiosam, skin diseases